shivam cement(shivam cement) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
काठमाण्डौ । पछिल्लो समयको बजारको हटकेक शिवम सिमेन्टको सेयरमा उच्च खरीद चाप देखिएको छ । कारोबार समय सकिन करिब सवा घण्टा बाँकी छँदा मार्केट डेप्थमा यो कम्पनीको सेयरमा एकाएक उच्च खरीद चाप देखिएको हो । नेप्सेमा सूचिकृत देशकै पहिलो सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगको रुपमा रहेको यो कम्पनीमा यो समाचार तयार पार्दासम्म ८५ हजार ४१५ कित्ताको...
सेयर किनेर होल्ड गर्नसक्नेलाई शिवमको बम्पर: २९ कारोबार दिनमा १२०% को रिटर्न !
काठमाण्डौ । मात्र २९ करोबार दिनमा १२० प्रतिशतले सेयर मूल्य बढेपछि शिवम सिमेन्टको सेयर होल्ड गर्ने लगानीकर्ता मालामाल भएका छन् । यो कम्पनीको सेयर मूल्यमा उछाल आई बीचको केही समय सुस्ताए पनि पुनः बढ्न थालेको छ । नजानिँदा पारामा यो कम्पनीको मूल्य बढिरहेको छ । अप्रील २४ को दिन शिवम सिमेन्टको अन्तिम बिक्री मूल्य प्रतिकित्ता ३०७ रुपैयाँ...
शिवमको सेयर कर्नरिङमा ५८ सँगै ब्रोकर नं. ४२ को पनि संलग्नता, मूल्यमा रेकर्ड
काठमाण्डौ । शिवम सिमेन्टको सेयरमा फेरि कर्नरिङ सुरु भएको छ । लामो समयसम्म निरन्तरको कर्नरिङ र चलखेलपछि ६२९ रुपैयाँ प्रतिकित्ता पुगेको शिवमको सेयर मूल्यमा फेरि यसअघि झै चलखेल हुन थालेको देखिएको हो । यो कम्पनीको सेयरमा लामो समयदेखि ब्रोकर नम्बर ५८ मार्फत तीव्र चलखेल र कर्नरिङ भएको थियो । ठूला सेयर खेलाडीहरुले नियोजित रुपमा सेयर...
शिवममा पछिल्लो खेल: ठूला बिक्री गरी भाग्दै, साना खरीदमा आक्रामक !
काठमाण्डौ । शिवम सिमेन्ट्स लिमीटेडको सेयरमा जारी बढ्दो यात्रामा सोमबार ब्रेक लागेको छ । अघिल्लो साताको बुधबार झै यो कम्पनीको सेयरको बढोत्तरी यात्रामा पुनः ब्रेक लागेको हो। बढिरहेको कुनै कम्पनीको सेयरमूल्य घट्नुको अर्थ हो, त्यसमा बढेको बिक्री चाप, अर्थात, किन्ने भन्दा बेच्ने बढी भएपछिको अवस्था । शिवम सिमेन्टको सेयरको सोमबारको...
शिवमको सेयर कर्नरिङ गर्ने ५८ नं. ब्रोकर आजदेखि बिक्रीमा आक्रामक
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । शिवम सिमेन्ट लिमिटेडको सेयर चलखेलमा विगत केही हप्तादेखि निरन्तर खरीद गरी ठूलो परिमाणमा सेयर उठाएको ब्रोकर नम्बर ५८ सोमबारदेखि बिक्रीमा आक्रामक देखिएको छ । धेरै दिनदेखि दैनिकजसो शिवमको सेयर कर्नरिङ्ग गरिरहेको ब्रोकर नम्बर ५८, नासा सेक्युरिटीजले सोमबारदेखि भने बिक्रीमा अग्रेसिभ मूभ लिएको नेप्सेको...
पन्ध्र दिनमै जुन कम्पनीको सेयर १०३% ले बढ्यो, लगानीकर्ता मालामाल
काठमाण्डौ । तीव्र इन्साइडर ट्रेडिङ, सेयरको कर्नरिङ र यस्ता धन्दामा नियामकदेखि सम्बद्ध सबै पक्षको गठजोडका कारण पछिल्लो समय नेपालको सेयर बजारले ‘जूवाको खाल’लाई बिर्साइदिने चरित्र प्रदर्शन गर्न थालेको छ । ह्वीम र हल्लाकै भरमा कुनै निश्चित कम्पनीको सेयर हारालुछ भइरहेको दृश्यले यस्तै संकेत गर्दछ । नेप्सेमा सूचिकृत कम्पनीहरुले...
ब्रोकर नं. ५८ द्वारा शिवमको सेयर कर्नरिङमा यस्तो खेल !
काठमाण्डौ । शिवम सिमेन्टको सेयर मूल्य बढाउन तीव्र चलखेल भइरहेको छ । यही क्रममा ब्रोकर नम्बर ५८ मार्फत यो कम्पनीको सेयर कर्नरिङको काम पनि तीव्र बनेको अर्को तथ्य भेटिएको छ । यो ब्रोकरमार्फत शिवम सिमेन्टको तेश्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण निकै राम्रो आउँदैछ भन्ने हल्ला बजारमा व्यापक बनाइएको थियो । हल्ला गरिएजस्तो यो कम्पनीको तेश्रो...
शिवमको उछाल यात्रामा ब्रेक, बिक्री गर्नेहरु अधिक
काठमाण्डौ । केही दिनदेखि निरन्तर रहेको शिवम सिमेन्टको सेयर मूल्यको बढोत्तरी यात्रामा ब्रेक लागेको छ । शिवम सिमेन्टको सेयर मूल्यमा सुनियोजित रुपमा सो सिमेन्ट कम्पनीका संचालक, उनीसँग निकट ब्रोकर र केही ठूला खेलाडीहरुले खेलेका बिषय पर्दाफास भएसँगै लगानीकर्ता सचेत भई सेयर बिक्री गरी सुरक्षित बन्नेतर्फ लाग्दा शिवमको सेयर मूल्य घटेको...
शिवम सिमेन्टमा रमिता: बढाउने र घटाउनेबीच घमासान
काठमाण्डौ । शिवम सिमेन्टको सेयर दोश्रो बजारमा ठूला लगानीकर्ताले कर्नरिङ गरेको र सुनियोजित रुपमा गिरोहहरु परिचालन गरी अस्वभाविक रुपमा मूल्य बढाउने खेल भएको पर्दाफास भएसँगै बुधबारको बजारमा यो कम्पनीको सेयरमा रमिता देखिएको छ । बजार खुलेदेखि नै मिनेट–मिनेटको अन्तरालमा सेयर मूल्य घटाउने र बढाउनेहरुबीच घमासान प्रतिस्पर्धा चल्यो ।...
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । शिवम सिमेन्ट्सको सेयर मूल्यमा दिनहँुजसो पोजिटिभ सर्किट लागिरहेको छ । कम्पनीको तेश्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण उत्साहजनक आउने हल्ला पिटाएर यो कम्पनीको सेयरको मूल्य बढाउने अभियान थालिएको थियो । अहिले पनि विभिन्न ब्रोकरेज हाउसमा बिजशाला टिम पुग्दा युनिलिभर,बोटलर्स नेपाल(तराई) लिमीटेडको मूल्य सोसरह नै...
शिवम सिमेन्टको कमालः एक महिनामै ७७% को रिटर्न, आइपीओ खरीद गर्नेलाई ८२%
काठमाण्डौ । शिवम सिमेन्टले प्रत्येक दिनजसो कमाल गर्न थालेको छ । यो कम्पनीको सेयर मूल्य नयाँ वर्षको एक महिनाको अवधिमा ७७ प्रतिशत भन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । नयाँ वर्षको पहिलो कारोबार दिन बैशाख २ गते शिवम सिमेन्टको दोश्रो बजारको अन्तिम बिक्री मूल्य प्रतिकित्ता ३०८ रुपैयाँ रहेको थियो । नयाँ वर्षको ओपनिङ महिना बैशाख ३१ गते मंगलबार...
शिवम सिमेन्टले इतिहास रच्यो, सेयर मूल्य पहिलोपटक रु.५०० नजिक !
काठमाण्डौ । शिवम् सिमेन्टले तेश्रो त्रैमाससम्म खूद नाफा १ अर्ब माथि कटाएको खबरका कारण लगानीकर्ताले मरिहत्ते गरेर सेयर खरिदारी गर्न खोज्दा सोमबार पनि यो कम्पनीको सेयर मूल्यमा पोजिटिभ सर्किट लागेको छ । शिवमको मूल्य १० प्रतिशतको हाराहारीमा बढेर ४९७ प्रतिकित्ताको उचाईमा पुगेको हो । प्रिमियमसहित प्रतिकित्ता ३०० रुपैयाँको दरले...
सेयर मूल्यमा तीव्र बढोत्तरी भएको शिवमको खूद नाफा औसत, तर, बाँड्नसक्छ आकर्षक लाभांश
काठमाण्डौ । विगत १२ कारोबार दिनहरुको अवधिमा ४७ प्रतिशत भन्दा बढी मूल्य बढाइएको शिवम सिमेन्ट्स लिमीटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेश्रो त्रैमाससम्म १ अर्ब ५ करोड खूद नाफा आर्जन गरेको छ । यो भनेको अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १३.०६ प्रतिशतले बढी हो । चौथो त्रैमाससम्म पनि नाफाको यो गति कायमै रहे शिवम सिमेन्ट्सले यो वर्ष १ अर्ब ४१...
काठमाण्डौ । शिवम् सिमेन्टको सेयर होल्ड गरेर बस्नेहरुले १२ कारोबार दिनको अवधिमा ४७ प्रतिशतभन्दा बढीले सम्पत्ति बढाएका छन् । बैशाख ११ गते दोश्रो बजारमा शिवम् सिमेन्टको मूल्य उसले जारी गरेको आइपीओ मूल्य नजिक पुगेको थियो । सो दिन शिवम् सिमेन्टको अन्तिम बिक्री मूल्य ३०७ रुपैयाँ प्रतिकित्ता रहेको थियो । त्यसपछि बढ्न थालेको यो...